Ny governemanta dia mieritreritra ny tsy hiverenan'i Uganda Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny governemanta dia mieritreritra ny tsy hiverenan'i Uganda Airlines
Jolay 18, 2013
KAMPALA, Oganda - Ny governemantan'i Oganda dia nanao dinika momba ny famelomana indray ny Uganda Airlines izay nofoanana tamin'ny 2001.
Ny antony lehibe indrindra nahatonga ny fahafatesany dia ny fandaniam-bola be ary ny enta-mavesatra trosa izay tsy zakan'ny governemanta haingana.
Raha ny filazan'ny minisitry ny Fitateram-panjakana, Stephen Chebrot, nisy taratasy kabinetra namboarina mba hifampidinihana bebe kokoa amin'ireo antoko liana isan-karazany mba hanome làlana ho amin'ny fiverenan'ny kaompaniam-pirenena Oganda.
Chebrot dia nilaza tamin'ny herinandro lasa teo: "Nanamboatra taratasy momba ny kabinetra tamin'ny namana hafa tao amin'ny Cabinet izahay mba hanohanany ny fifohazana. Izy io koa dia manana endrika izay eritreretinay fa ho tahaka ny ahoana ny zotram-piaramanidina vaovao. ”
Uganda Airlines, eo ambanin'ny Oganda Airlines Corporation, no mpitondra ny sainan'i Oganda. Niorina tamin'ny 1976 tao anatin'ny fihenjanana misy eo amin'ny Kenya, Tanzania ary Oganda izay mandrafitra ny East Africa Airways teo aloha. I Idi Amin izay nody mandry dia nanao izay hahazoana antoka fa nidina ny tany ny kaompaniam-pitaterana tamin'ny 1977 miaraka amin'ny seranam-piaramanidina Entebbe ho ivon-toerany.
Raha naneho hevitra momba io olana io ny tompon'andraikitra iray miaraka amin'ny Ethiopian Airlines dia nilaza hoe: “Manao zavatra izay mahasoa ny firenena ny governemanta. Aminay dia hevitra tsara iray izay hampiroborobo ny hetsiky ny mpandeha, ny fifaninanana ara-drariny, ny fampiasam-bola ary ny fitomboan'ny fizahantany. ”
Chebrot dia nilaza fa ny fifohazam-panahy dia tsy hiorina amin'ny fampitomboana tombony fotsiny, fa koa ho fotodrafitrasa hanohanana ny dia an'habakabaka.
Oganda dia nitombo ny isan'ny mpandeha nifindra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Entebbe. Nahatratra 1.3 tapitrisa ny mpandeha tamin'ny 2012.
Na izany aza, hatsatra ireo isa raha ampitahaina amin'ny seranam-piaramanidin'i Nairobi's Jomo Kenyatta International any Kenya sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Julius Nyerere ao Dar es Salaam izay mahazo mpandeha efatra tapitrisa mahery isan-taona.
Manantena i Chebrot fa ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Entebbe na amin'ny fikirakirana ny entana na amin'ny terminal terminal ho an'ny mpandeha dia hanintona kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa eto amin'ny firenena ary hampiakatra ny isan'ny mpandeha.
Nilaza izy fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia manangana fisondrotana 4.5% eo amin'ny tsenan'ny mpandeha ary fitomboana 1.4% ho an'ny filan'ny entana manerantany.
"Midika fiakarana tombony azo avy amin'ny 6.7 miliara dolara na 1% ny tombom-barotra net amin'ny 2012 ka hatramin'ny $ 8.4 miliara na 1.3% ny tombom-barotra net amin'ny faran'ity taona ity," hoy i Chebrot.
Tamin'ny 2012, nitombo 6% ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena niaraka tamin'ny fitomboana mafy indrindra voarakitra ao Moyen Orient, Amerika Latina ary Afrika.
"Vonona ihany koa izahay handray fiaraha-miasa amin'ny daholobe miankina amin'ny fanitarana ny seranam-piaramanidina sy ny famelomana indray ny Oganda Airlines," hoy ny minisitra.
Tamin'ny volana oktobra 1988 dia nisy fiaramanidina Uganda Airlines Boeing 707 nianjera tany akaikin'i Roma ka 31 no maty, saingy nanohy ny serivisy niaraka tamin'ny fiaramanidina nampanofaina, nanidina nankany Dubai sy Nairobi. Ireo sidina ireo dia najanona tamin'ny faran'ny 1989.
Tsy nahomby ny fikasana hanao privatisasie ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary nanapa-kevitra ny governemanta fa hakatona ny mpitatitra ary hampiato ny vola fanampiana fanampiny.
“Nanokatra ny lanitra ny Ogandà. Ny finoanay sy ny politikantsika dia ny fanomezana lalana hafainganam-pandeha betsaka araka izay azo atao ho an'ny besinimaro, ”hoy i Chebrot.
Vivendra Lochan, tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Association of Airlines of South Africa, dia nampitandrina ireo mpitatitra nasionaly tsy hanidina amin'ny lalana tsy mahasoa satria tsy maharitra io.
Nanoro hevitra ireo zotram-piaramanidina izy hifantoka amin'ny fitaterana entana satria ny vola miditra aminy dia nihoatra ny an'ny mpandeha mpandeha.